အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ နန်းဆုဦးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……. – Shwe Naung
N N | October 7, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်တွေ အချစ် ပိုရ တဲ့ မင်းသမီး ချောလေး နန်းဆုဦး ကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် တင် ပေးလေ့ ရှိပါ တယ်။
သူမ က တော့ ယခု မှာ အသား အရေ စိုပြေပြီး အိမ်နေရင်း ပုံစံလေးနဲ့ တောင် အရမ်း ချစ်စရာကောင်း နေကာ ဆွဲဆောင် မှုရှိရှိ လှပနေ တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင် လေးကို ချပြ လာခဲ့ပါ တယ်။
အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေးဟာ ပရိသတ် တွေကို အချစ် တွေ ပိုစေ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာ ရယူထား နိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ” ဒီရင်ထဲ ကို ဝင်ကြည့် လှည့် နင်သိဖို့ “ဆိုပြီး ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး နဲ့ အတူ ရေးသား ထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ချစ်ပရိသတ် တွေ အတွက် မင်းသမီး ချောလေး နန်းဆုဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံ လေး နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ Tiktok ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပြီး အဆိုပါ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါ တယ်။
မင်းသမီး ချောလေး နန်းဆုဦး က တော့ အောင်မြင် လျက် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အနု ပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှုကို အခိုင်အမာ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာ အလုပ် တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိ နေပြီး အနုပညာ လောက မှာ နေရာ တစ်ခု ကို ရယူ ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေကို လည်း ရိုက်ကူး လျက် ရှိနေ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ကောက်‌ကြောင်းနဲ့ ပရိသတ်ကို ညိုယူထား စားတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
ကိုယ်ကျန်းမာဖို့ Gym ဆော့ 🏋️ စိတ်ချမ်းသာဖို့ မမရှိန်ကိုချစ် 🥰 ကိတ်လွန်း နေတဲ့ အလန်းစား ဆက်ဆီ ကျကျ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်…
သီဟတင်စိုး ရဲ့ ချစ်ဇနီး အကယ်ဒမီ ဇင်မာဦး ယနေ့ နေ့လည်တွင် ကွယ်လွန် သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း….
ဆွဲမက်ဖွယ် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ မိုးပွင့်ဖြူရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..